Joshua – Bhaibheri Dzvene MuChiShona (BDMCS)
Jehovha anorayira Joshua 1 Zvino shure kwokufa kwaMozisi muranda waJehovha, Jehovha akataura naJoshua mwanakomana waNuni, muranda waMozisi achiti, 2 “Mozisi muranda wangu afa. Zvino iwe navanhu ava chigadzirirai kuyambuka rwizi rweJorodhani mupinde munyika yandava kupa vana vaIsraeri. 3 Ndakupai nzvimbo yose yose yamuchatsika netsoka dzenyu, sezvandakavimbisa Mozisi. 4 Nyika yenyu ichabva kugwenga ichisvika kuRebhanoni, uye […]
Posted byadmin August 26, 2017 Posted inJoshuaLeave a comment on Joshua 1
Rahabhi naVashori 1 Zvino Joshua mwanakomana waNuni akatuma vashori vaviri muchivande kubva kuShitimu. Akati, “Endai munotarisa nyika, kunyanya Jeriko.” Naizvozvo vakaenda vakandopinda mumba mechifeve chainzi Rahabhi vakagaramo. 2 Zvino mambo weJeriko akaudzwa kuti, “Tarirai! Kune vamwe vaIsraeri vauya muno manheru anhasi kuzoshora nyika.” 3 Naizvozvo mambo weJeriko akatumira shoko kuna Rahabhi achiti, “Budisa varume vauya […]
Posted byadmin August 26, 2017 Posted inJoshuaLeave a comment on Joshua 2
VaIsraeri vanoyambuka Jorodhani 1 Mangwanani-ngwanani Joshua navaIsraeri vose vakasimuka kubva paShitimu vakaenda kuJorodhani, pavakavaka misasa vasati vayambukira mhiri. 2 Shure kwamazuva matatu vatungamiri vavanhu vakapinda mumisasa, 3 vachirayira vanhu vachiti, “Pamunoona areka yesungano yaJehovha Mwari wenyu, navaprista, vaRevhi, voitakura, munofanira kubva panzvimbo dzenyu moitevera. 4 Ipapo muchaziva nzira yamunofanira kuenda nayo, nokuti hamusati mambofamba nenzira […]
Posted byadmin August 26, 2017 Posted inJoshuaLeave a comment on Joshua 3
Matombo Gumi Namaviri anomiswa paGirigari 1 Rudzi rwose parwakapedza kuyambuka Jorodhani, Jehovha akati kuna Joshua, 2 “Sarudza varume gumi navaviri kubva pakati pavanhu, mumwe chete parudzi rumwe norumwe, 3 Ugovaudza kuti vatore mabwe gumi namaviri kubva pakati peJorodhani panga pakamira vaprista chaipo mugoatakura mugoaisa pamunorara nhasi manheru.” 4 Saka Joshua akadaidza varume gumi navaviri vaakanga […]
Posted byadmin August 26, 2017 Posted inJoshuaLeave a comment on Joshua 4
Kudzingiswa paGirigari 1 Zvino madzimambo ose avaAmoni aigara kumavirazuva eJorodhani namadzimambo ose avaKenani vaigara pedyo negungwa vakanzwa kuti Jehovha akanga aomesa Jorodhani pamberi pavaIsraeri kusvikira vayambuka, mwoyo yavo yakarukutika vakasazova nokushinga nokuda kwavaIsraeri. 2 Panguva iyoyo Jehovha akataura naJoshua akati, “Gadzira mapanga amatombo anopinza ugodzingisa vaIsraeri zvakare.” 3 Naizvozvo Joshua akagadzira mapanga amatombo akadzingisa vaIsraeri […]
Posted byadmin August 26, 2017 Posted inJoshuaLeave a comment on Joshua 5
1 Zvino guta reJeriko rakanga rapfigwa zvakasimba kwazvo nokuda kwavaIsraeri. Hapana akabuda kunze uye hapana akapinda mukati. 2 Zvino Jehovha akati kuna Joshua, “Tarira, ndaisa Jeriko mumaoko ako, pamwe chete namambo waro navarume varo vehondo. 3 Fambai mutenderere guta kamwe chete pamwe navarume vose vehondo. Muite izvi kwamazuva matanhatu. 4 Ngapave navaprista vanomwe vanotakura hwamanda […]
Posted byadmin August 26, 2017 Posted inJoshuaLeave a comment on Joshua 6
Chivi chaAkani 1 Asi vaIsraeri vakaita zvisina kutendeka pamusoro pezvinhu zvakatukwa; Akani mwanakomana waKami, mwanakomana waZimiri, mwanakomana waZera, worudzi rwaJudha, akatora zvimwe zvezvinhu zvakatukwa. Naizvozvo hasha dzaJehovha dzakamukira vaIsraeri. 2 Zvino Joshua akatuma vanhu kubva Jeriko kuenda kuAi, iri pedyo neBheti Avheni kumabudazuva kweBheteri, akavaudza kuti, “Endai munoshora nzvimbo iyi.” Naizvozvo varume vakaenda vakanoshora Ai. […]
Posted byadmin August 26, 2017 Posted inJoshuaLeave a comment on Joshua 7
Kuparadzwa kweguta reAi 1 Zvino Jehovha akati kuna Joshua, “Usatya kana kuvhundutswa. Tora varwi vose uende unorwisa Ai. Nokuti ndaisa mambo weAi, navanhu vake, neguta rake nenyika yake mumaoko ako. 2 Munofanira kuita kuAi namambo wayo sezvamakaita kuJeriko namambo waro, kunze kwokuti apa munofanira kuzvitakurira zvamunotapa zvavo nezvipfuwo. Muise vangavandira guta necheseri kwaro.” 3 Naizvozvo […]
Posted byadmin August 26, 2017 August 26, 2017 Posted inJoshuaLeave a comment on Joshua 8
VaIsraeri vanonyengedzwa navaGibheoni 1 Zvino madzimambo ose aigara kumavirira kweJorodhani navaiva munyika yamakomo, mujinga mamakomo kumadokero, mumahombekombe ose eGungwa Guru kusvikira kuRebhanoni (madzimambo avaHiti, navaAmori, navaKenani, navaPerizi, navaHivhi navaJebhusi). 2 Vakaungana pamwe chete kuti varwisane naJoshua navaIsraeri. 3 Asi vanhu veGibheoni pavakanzwa zvakanga zvaitwa Jeriko neAi naJoshua, 4 vakafunga zano: Vakaenda senhume nembongoro dzavo dzakatakura […]
Posted byadmin August 26, 2017 Posted inJoshuaLeave a comment on Joshua 9
Zuva rinomira panzvimbo imwe chete 1 Zvino Adhoni-Zedheki mambo weJerusarema akanzwa kuti Joshua akanga atora Ai akariparadza zvachose, akaitira Ai namambo waro sezvaakanga aitira Jeriko namambo wayo, uye kuti vanhu veGibheoni vakanga vaita sungano yorugare navaIsraeri uye kuti vaigara pedyo navo. 2 Iye navanhu vake vakavhundutswa kwazvo nazvo, nokuti Gibheoni rakanga riri guta guru, rakaita […]
Posted byadmin August 26, 2017 Posted inJoshuaLeave a comment on Joshua 10